Faallo : Maxay ku nuugtaa, maxayse ka nuugtaa!! – Kasmo Newspaper
Faallo : Maxay ku nuugtaa, maxayse ka nuugtaa!!
Updated - September 8, 2017 11:22 am GMT
London (Kasmo), Maalmahaan, Warbaahinta iyo baraha bulshada Soomaalida, waxaa buux-dhaafiyay sheekada iyo hadalhaynta sarkaal ka tirsan Ururka ONLF oo xukuumadda Soomaliya u gacangalisay dalka Itoobiya.
Siyaasaddii iyo Garsoorkii dalkuba waa dhaawacanyihiin, waxayna u muuqdaan baryahaan sidii hashii iyo nirigtii waraabuhu midna candhada goostay middii kalena faruuryaha, dabadeedna yiri: Maxay ku nuugtaa, maxayse ka nuugtaa!
Waa dhacdo, guud ahaan, dadweynuhu, mucaarad iyo muxaafidba, u arkeen mid xanuun badan oo aan horey nooceeda oo kale uga dhicin Dowlad Soomaaliyeed, ilaa madaxbannaanidii.
Dadku waxay falanqaynayaan qaabkii, muddadii iyo sharciyaddii loo fuliyay ficilkaas, iyada oo laga eegayo dhanka siyaasadda, qaanuunka iyo xuquuqda aadanaha intaba.
Sarkaalka laga hadlayo waa Cabdikariim Sheekh Muuse, Soomaali u dhashay, lagana soo qabtay Gobollada Dhexe dhammaadkii Agosto 2017, dambiyada lagu tuhmay waxaa shaaca laga qaaday, qiyaastii, 10 maalmood ka dib markii la dhiibay.
Gafka 1aad wuxuu yahay in aan la soo taagin Maxkamad isla markaasna aan la marsiin caddaaladda dalka, iyada oo la moodo in si bareer ah loo hareer maray hay’dihii ku shaqada lahaa ee Garsoorka.
Qof kasta oo ku sugan gudaha Jamhuuriyadda, muwaadin iyo shisheeye kuu doonaba, wuxuu hoos imanayaa shuruucda iyo garsoorka Qaranka u dagsan, iyaga oo qur ah ayaana go’aamin kara aayihiisa.
Dal kasta wuxuu dal kale oo shisheeye la galaa heshiis maxaabiista la isku weydaardsado marka uu qiimeeyo heerkiisa ku-dhaqanka garsoorka, isla markaasna ku qanco heerkiisa xuquuqda aadanaha.
Heshiis caynkaas ah oo heer Dowladeed loo galay kana dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya oo la ogyahay hadda ma jiro, horeyna uma jirin waligeed, haddii uu jiri lahaa xitaa, wali waxaa loo baahnaan lahaa dariiqa qaanuunka ee Maxkamadda.
Maamulka Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre, xukuumaddii isla xisaabtanka, waa in ay diyaar u noqdaan, siyaasiyiinta iyo Barlamaanka ka sokow, in garsoorka dalku la xisaabtamo, dadweynaha Soomaaliyeedna ay ka jid-baxaan.